Usabisa ngokuqumba phansi iMetro FM umsakazi | News24
Usabisa ngokuqumba phansi iMetro FM umsakazi
Durban - Usemkhankasweni wokusithwesa umthwalo onzima isiteshi somsakazo ayesebenza kuso uTbo Touch okuyiMetro FM.
Lo msakazi oshiye eMetro FM, wajoyina iCliff Central, wabuye wayishiya nayo wazivulela esakhe isiteshi iTouch HD uthi uzolokhu ebantshontsha kancane abasakazi abanohlonze kulesi siteshi baze baphele.
Uthi kuyoze kulamule ukuthi lesi siteshi simnike ithuba lokuba avalelise kahle kubalandeli bakhe emoyeni njengoba wahamba engavalelisanga.
Kuzokhumbuleka ukuthi lo msakazi washiya isigubhukane kulo msakazo ekhala nangokuthi akazange anikwe ithuba lokuthi avalelise kubalandeli bakhe emuva kokukhipha incwadi yokwesula emsebenzini.
Ekhuluma nabeZalebs uthe kusekuncane lokhu abakubonayo abaphathi beMetro FM.
"Ngizothatha bonke abasakazi abanohlonze kuze kuba banginika uhlelo lwami lokuvalelisa. Ngiyazigqaja ngeminyaka eyi-12 engiyichithe emsakazweni. Ngabanika incwadi yokwesula emsebenzini ekuseni ngehora lesi-9 ngathi kubona namuhla ngicela ukuvalelisa kubalaleli bami. Uyazi ukuthi bathini? Bathi angihambe. Ngeke ngilukhohlwe lolo suku," kusho uTbo Touch.
Ebalula akwenzela iMetro FM, uthi nguyena kuphela owakwazi ukuletha izihlabani phakathi ezindlini zomsakazo okubalwa kuzo uJay-Z, uFloyd Mayweather, uKeri Hilson noJohn Legend. Uthi wakwazi nokuthi abe nengxoxo ekhethekile noHeavy D ngaphambi kokuba ashone, nonina ka-2Pac akhuluma naye ngesikhathi kuyisikhumbuso salo mculo.
OLUNYE UDABA: Kudutshulwe kwabulawa umfundi enyuvesi
"Konke lokhu ngakwenza kukumarekhodi abo kodwa-ke ngeke ngikhalele ubisi oseluchithekile. Ebengikudinga nje wukuvalelisa kuphela lokhu engingakaze ngikwenze kuze kube manje. Ngiyobuyela khona (Metro Fm) mhla nganikwa uhlelo lwami lokuthi ngivalelise," kusho yena. Esitatimendeni asibhalile uphinde wathi inkontileka kaRobert Marawa isemotweni yakhe uTbo Touch. Nakuba kungaqondakali ukuthi uchazani ngalokhu, kodwa lesi sitatimende sakhe siqinisa izinsolo zamahlebezi ake avela phambilini okuthi noRobert Marawa uzojoyina iTouch HD.
Khona manjalo ngoLwesihlanu kwasabalale izindaba zokuthi u-Unathi Msengana obethula uhlelo lwasekuseni kwiMetro FM ushiyile kulo msakazo. Akukacaci ukuthi lo msakazi ophinde abe yijaji lomncintiswano wama-Idols SA ulibangisaphi.
Okhulumela iSABC uMnu Kaizer Kganyago, engxoxweni abenayo neTshisaLive ukuthi walile ukuqinisekisa izindaba zokushiya kuka-Unathi, wathi bazophawula ngalolu daba kwisitatimende sabezindaba abazosikhipha maduze.
"Asifuni ukukhuluma ngomuntu oyedwa
Kuphinde kwasabalala nezinye izindaba zokuthi uDJ Fresh obengumsakazi we-5 FM usejoyine iMetro FM kanti kubikwa ukuthi uzokwethula uhlelo lwasekuseni. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi iMetro FM isanda kulaxazwa nguGlen Lewis naye ojoyine iTouch HD.
NgoLwesine iTouch HD idedele uhlu lwamagama abasakazi asebejoyine lesi siteshi, phakathi kwabo okukhona abahlonishwa kakhulu kule ndima yezobumnandi.